समग्र राष्ट्रको सिंगो विचार
हातमा शासन लिएपछि पाएको एघार बर्षमा राजा महेन्द्रबाट भएका कामहरुको निकै थिए । महेन्द्रको नाम लिंदा पनि कुल्ला गर्ने विरोधीहरु समाजमा नभएका हैनन । भारतिय संसदमा औ्रपचारिकरुप मै उनको आलोचनाको प्रस्ताव आएको कुरा इतिहासमा छ । आङ्खनो कदमबाट पछि फर्कन दवाव दिन तात्कालिन भारतिय नेताहरु एक भएका थिए, तर उनी संग स्पष्ट सोच र कार्ययोजना थियो । त्यसैले अहिले कुनै वेला महेन्द्रको नाम लिंदापनि कुल्ला गर्ने श्रेणीका विद्वानहरु पनि उनको कुरा गर्न विवश छन ।
छयालिस पछिका यत्रा बर्षहरुमा अनेकौ सोचका कुरा आए । आफुलाई नलाग्ने तर अरुले मान्नैपर्ने अनेकौ विधि आए । समाजका हरेक वर्गका बालवालिका स्कुले जीवनमा संगै हुर्कने सबै नेपाली मनले नै एक बनाउने परिपाटी तोडियो । वालपनदेखि नै समाजमा वर्ग तैयार भयो , स्कुल र बोर्डि¨को फरकले विभाजनको भेटिदै गएको रेखालाई खाडलमा परिणत गरियो । नेतृत्व योजना तर्जुमा संगै त्यो असफल भएको कारण पनि अग्रिम तैयार गर्न तल्लिन भयो । जनताले व्यक्ति भएर निर्वाध उपयोग गरेका अधिकार दलहरुको कृपामा सरुवा गरियो ।
सोच(भिजन)को कारखाना चालु छ । त्यस्तै सोचको मोहमा परेर जनताले दिएको मतले सत्तामा पुगेपछि गरेको काम भने आङ्खनो सुविधा बढाउनु बाहेक अरु भएको छैन । यस्ता सोचहरु जो सत्ता बाहिर हुँदा संझिइन्छ र सत्ताामा पुग्ने वित्तिकै भुलिन्छ, के कामका हुन ? बहुदल पुर्नस्थापना भएदेखि सपनाको बाढी आउको छ तर कार्यरुप ? महेन्द्रले विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सक्दो गरे । तर अहिले उच्च पदस्थ कर्मचारी मात्र हैन मुलुक हाँक्ने नेताहरु पनि विदेशको अस्थाई नागरिकता गोजीमा बोकेर बसेका छन । पहिल्यै विदेशिएका आङ्खना सन्तान सबै विदेशमै राखेर नेपालको नेतृत्वको दावेदारी गर्दैछन .